အာဖရိက & အရှေ့အလယ်ပိုင်း
ဗဟို & တောင်အမေရိက
Tech မှ & ဂီယာ
မေးခွန်းငါဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်စင်္ကာပူသို့သွားရောက်သင့်ပါတယ်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာအဖြေရှိပါတယ်။ ဒါဟာဟောင်ကောင်ပါပဲ။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။
ဟောင်ကောင်သည် သာ. ကောင်း၏ Is ဘယ်လို
မြင်ကွင်းများများအတွက်: ဒီဟောင်ကောင်ကယ့်ကိုစင်္ကာပူကွာမှုတ်ဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲကနေမိုးမျှော်တိုက်ဘုရားကျောင်းမှအရင်းရှင်ရန်, ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦးများနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပြတိုက်အားဖြင့်ဟောင်ကောင်မြင်ကွင်းများနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။ ဟောင်ကောင်အတွက်ခေတ်သစ်နှင့်အတူအစဉ်အလာ၏ရောနှောနေတဲ့အစွမ်းထက်ပေါင်းစပ်စေသည်, မြို့စူးစမ်းခံရဖို့ဝေးချမ်းသာသမိုင်းရှိပါတယ်။ စင်္ကာပူရဲ့မြင်ကွင်းများ Disneyland တူသောအနည်းငယ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစျေးကွက်, ဘုရားကျောင်းနှင့်ဟောင်ကောင်၏ငါးဖမ်းရွာတွေအများကြီးအသက်ရှင်ရကြ၏။ ပြောင်းပြန်, စင်္ကာပူမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းက၎င်း၏ကိုလိုနီအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အကြောင်းကိုပိုမိုပြုတော်မူပြီ။ ဗြိတိန်ခေတ်မြင်ကွင်းများတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်ရေးရှိပါသည်။
စားသောက်ဆိုင်များအတွက်: နှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးများစားစရာဘို့ထိပ်တန်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျတည်နေရာဖြစ်စေအတွက်အစားအစာတစ်ခုအဓမ္မရွေးချယ်ရေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဟောင်ကောင်မှာမီနိုင်တဲ့ တုံအစားအစာ ။ ဒီမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားကမ္ဘာပေါ်မှာထက်ရိုးရိုး သာ. ကောင်း၏။ ဟောင်ကောင် Kongers တစ်ဦးလက်ျာဘက်ထွက်အစာစားစဉ်းစားပါနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ၏သက်သက်ငွေပမာဏကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာပါပဲ။ ဒါဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားကမ္ဘာပေါ်မှာထက်ခေါင်းကိုနှုန်းဟောင်ကောင်တွင်ပိုမိုစားသောက်ဆိုင်တွေမှာရှိပါတယ်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဟိုင်နန်ထံမှ Harbin မှတရုတ်အစားအစာတစ်ခုပြိုင်ဘက်ကင်းရွေးချယ်မှု, အပြင်, ဟောင်ကောင်မှာလည်းအာရှမှာအကောင်းဆုံး, ဆုရစားသောက်ဆိုင်အချို့မှမူလနေရာဖြစ်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်: ဟောင်ကောင်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကရှိနိုင်ပါသည်။ စျေးပေါသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သော - တကယ်အနည်းငယ်အမှားရှိပါတယ်။ ကူးတို့, ဘတ်စ်ကား, လမ်းရထားနှင့်မြေအောက်ရထားရှိသမျှကောင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်နယ်မြေတစ်ခုလုံးအကြောင်းကိုပဲဝတ်ပြုကြလော့။ စင်္ကာပူအကယ်စင်စစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနမ slouch သည်နှင့်လည်းန်းကျင်ရရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ကလေးတွေအတွက်: အတူ သမုဒ္ဒရာပန်းခြံနှင့်ဟောင်ကောင် Disneyland နှစ်ဦးစလုံးတမြို့လုံးအတွက်စင်္ကာပူကယ့်ကိုဤနေရာတွင်ဟောင်ကောင်ကိုမယှဉျနိုငျသညျ။ စင်္ကာပူပိုကောင်းအစိမ်းရောင်ပွင့်လင်းနေရာများမ, ဒါပေမယ့်ဆိ-ဖော်ရွေလှုပ်ရှားမှုများအဘို့, ဟောင်ကောင်စင်္ကာပူအထက်ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးဖြစ်ပါတယ်။
စျေးဝယ်များအတွက်: ကဆက်ဆက်စျေးဝယ်မဟုတ်စင်္ကာပူမှကြွလာသောအခါကမ္ဘာပေါ်မှာအနည်းငယ်မြို့ကြီးများဟောင်ကောင်အပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှစျေးများအတွက်စင်္ကာပူကိုဆက်ကပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လေးနက်ရချင်သောသူတို့အဘို့, ဟောင်ကောင်တစ် punters ပရဒိသုဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရာစျေးကွက်ကနေ multiplexing မောလ်များနှင့် swanky ဖက်ရှင်ဆိုင်များရန်သင့်ပလပ်စတစ်ဟောင်ကောင်အတော်လေးတစ်ဦးရိုက်နှက်မှုယူပါလိမ့်မယ်။ ရှန်ကျန်း၏ bargain စင်တာရုံနယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီး, တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်ဆုကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုစင်္ကာပူသည် သာ. ကောင်း၏ Is
friendly: ယခုဤအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သွားပေမယ့်စင်္ကာပူကပိုယဉ်ကျေးများနှင့်ဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည်အစဉ်ကမ္ဘာ့ friendliest လူမြိုးတစျမြိုးမဲပေးမည်မဟုတ်ပါသော်လည်း, စင်္ကာပူနှင့်ဟောင်ကောင်အကြားခြားနားချက်သိသာသည်။ ဟောင်ကောင် Kongers အနည်းငယ် businesslike နိုင်ပါတယ်။ စင်ကာပူလည်းပိုကောင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြော - အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
အင်္ဂလိပ်: ဒါကမှန်တယ်, ဟောင်ကောင်ရှိနေသော်လည်းဗြိတိန် 1997 အထိပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းမွို့၌ပြောပြီအင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကိုသိသိသာသာကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ကျယ်ပြန့်ပြောပြီနှင့်အတူစင်္ကာပူ, အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်အဓိကအခက်အခဲများရှိသည်ဖို့မသွားပါတယ် အင်္ဂလိပ်နှင့်အတူဟောင်ကောင် ဖြစ်စေ။
ပတ်ဝန်းကျင်: စင်္ကာပူဟောင်ကောင်ရဲ့မြို့ပြတောတွင်းနှိုင်းယှဉ်အလွန်မြို့ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းခြံများစင်္ကာပူတွင်နေရာတိုင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြို့လျော့နည်းကျဉ်းကျုတ်ခံစားရပါတယ်။ စင်္ကာပူမှဧည့်သည်များမှာလည်းဟောင်ကောင် cloaks သော Semi-အမြဲတမ်းမီးခိုးမြူထဲမှာလူးရန်မလိုပါ။ သူကပြောပါတယ်, ဟောင်ကောင်တောင်တက်နှင့်မြို့အပြင်ဘက်လမ်းလျှောက်များအတွက်စင်္ကာပူ outdoes ။
စင်္ကာပူက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မြို့ဖြစ်၏ပေမယ့်ကိုယ့်ဟောင်ကောင်အထိမခံမရပ်နိုင်။ ဟောင်ကောင်ရိုးရှင်းစွာပိုကြီးနှင့်တောက်ပလျက်, အရှိဆုံးလူတို့အဘို့, သာ. ကောင်း၏။
$ 200 အောက်မှာအကောင်းဆုံးဟောင်ကောင်ဟိုတယ်
သင့်ရဲ့ Next ကို Layover များအတွက်အကောင်းဆုံးဟောင်ကောင် Transit Tours မှ
ဟောင်ကောင်အမွေအနှစ်ပြတိုက် - အတိရှာဖွေရန်
ဂရင်းနစ် Foot ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Explore ကိုဘယ်လို
Mel Gibson သြစတြေးလျရှိပါသလား?
သြစတြေးလျ & နယူးဇီလန်
ငါးနေရာများတစ် Selfie Stick Trouble အတွက်သင်ဟာ Land ရနိုင်ပါသလား
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး & အာမခံ
တစ်လမ်းညွှန်မပါဘဲအင်ကာ Trail ခြေလျင်ခရီး
ဝါရှင်တန်၏ဝိညာဉျတျော - Cruise နဲ့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဝါရှင်တန်ဒီစီ
ဖလပ်အတွက်ထိပ်တန်း4တရုတ်ခေါကျဆှဲ
© 2021 my.traasgpu.com